Musoro wayo wainge wazvimba uchipenya apa pakati pake painge panunira nekuda kuiswa! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Musoro wayo wainge wazvimba uchipenya apa pakati pake painge panunira nekuda kuiswa!
Takapfuura border ndikanzwa munhu akuti saka unogara kupi ndichibva ndamuudza kuti kuGreendale apa munhu ayinge akutonakirwa neni, akatora kablanket kake ndokubva andifugidza makumbo ndoisa ruoko rwake pasi peblanket ndokuvhura zip yangu achibva atanga kubonyora mboro yangu. Ayiratidza kuti anoziva zvaaiyita ndipo pandikatanga kubata beche rake ndinzwe rainge ratota zvekuti apa munhu aingoisa perfume apa ayida kuvhara smell yebeche kuti vanhu vasazive zvaiyitika.
Takazosara kusvika paRoadport takudana, ndakazoti ndavharirwa mumba make iwe masasi handisati ndasvirwa sezvandikaitwa izvi, zviya zvekunzi hure harinzwe mafeelings kunyepa anenge asati abatwa panonaka. Takatanga kubatana kusvikira tese tavhukirwa mboro yainge yaita kuzvimba musoro apa uchipenya kunge waiswa polish.
Grace beche rake rainge raita kuzvimba nenyere apa achitadza kuita anything akabva akwira pamusoro pangu ndokuita mboro yekugarira apa akangosimudza kadress kake ndokubairira zimboro rangu masasi ndakachemerera ndichinzwa kunakirwa nebeche, masvirirwo acho ndeaye akuti magwana unodzoka chete. These handina mumwe wandinosvira kunze kwake Grace, beche rake rinogara rakanunira apa handibhadhare ndakusvirwa mahara.
Ndakainangisa pakati pemakumbo ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akabva ashinyira!
Driver akatanga kundiisa zvine speed ndikawona afinyamisa kumeso ndiye aah aaah tsaaa tsaaa!
Murume chaiye anopa mukadzi wake mukana wekutambisa chinhu chake asati amuisa
kuda kuiswa nyoro
Previous articleNdakainangisa pakati pemakumbo ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akabva ashinyira!
Next articleMurume ngaakuise everyday manheru & makuseni asati ayenda kubasa!